DOOLOWYADA BEERTA: SIDA LOO DOORTO KAALIYE KA MID AH DUURKA IYO CAWSKA CAWSKA - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Sida loo doorto duurka qallalan, talooyin iyo khiyaamo
Doolowyada beeraha waxaa laga heli karaa arseniga ah ee bannaanka u badan.
Maqasyada waxaa loo isticmaalaa si loo yareeyo baadiyaha, cawska ama ubaxa, laakiin dad badan ma yaqaaniin waxa loogu yeero. Maqaalkani, waxaad ka baran doontaa ujeedada qalabkan, noocyada maqasyada ah iyo inaad barato sharaxaad kooban oo ku saabsan budooyinka suurtogalka ah.
Doolinta beerta: sharaxaadda iyo ujeedada qalabka
Doolow ama gooyo beerta waa qalab gacan. Waxaa loo isticmaalaa in la gooyo caleemaha oo aan laamaha waaweyn. Waxaa loo adeegsadaa daryeelka geedo, geedo iyo canab.
Goolka caadiga ah waxaa laga sameeyaa qaybo badan: bare ka shaqeyn, guntin iyo lowska, guga, maqaar garab, qalab, quful iyo handles.
Iyada oo la adeegsanayo daabacan shaqeynaya, ayaa la gaari karaa awoodda goynta wanaagsan. Xaglaha geedku waa mid aad u fiiqan. Tani waxaa loo sameeyaa si sax ah oo nadiif ah loo jarjaro unugyada dhirta iyada oo aan kala tagin. Suunka ayaa leh geesaha jarista iyo, marka si fiican u shaqeynayo, had iyo jeer waa ay adag tahay.
Guga ayaa ku soo celiyaa budada si ay u hesho booska asalka ah ka dib goynta.
Qalabka taageerada ayaa si gaar ah u xiisa badan. Tani waxaa la sameeyaa si loo yareeyo khatarta. Mishiinka waxaa lagu qalabeeyaa jeex qaas ah oo loogu talagalay cabitaanka biyaha. Cajiibku wuxuu u adeegaa si uu u qabsado toogashada oo hayo.
Waxaanu idinla wadaagnaa sifooyinka dhirta sida budada, pears, fersken, jeeriga, plomme, cotoneaster, tufaax, clematis, khudaarta, cherry.
Buufiyadu waxay xaddideysaa istaraatiijka xadhkaha inta lagu jiro xoqista.
Goobtu waxay xaqiijinaysaa fikradaha ku jira xaalad xiran, qalabkana waxaa loo sameeyaa si loo baabi'iyo qashinka miraha marka la gooyo geedka.
Hantidhawrka wuxuu noqon karaa mid weyn oo yar. Doolow beerta weyn waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo kaabayaasha sare iyo geedo yaryar, iyo yar yar oo lagu jaro cawska iyo geedaha.
Noocyada dillaaca beerta
Doolowyada beerta waa noocyo kala duwan iyo ujeedooyin, waxayna dhammaantood leeyihiin magacyo kala duwan.
Ma taqaanaa? Maqasyada ugu horreysa waxaa laga heley dhaqaatiirta qadiimiga ah ee Masar. Waxa ay u muuqdaan kuwo qarnigii XVI qarnigii koobaad oo waxay ahaayeen kuwo isku mid ah.
Dareemaha dusha sare waxaa loo isticmaalaa in lagu burburiyo laamaha qalalan. Waxay si weyn u yareeyaan culeyska gacanta, sidaa daraadeed, waxay ku haboon tahay in lagu xakameeyo tiro badan oo geedo ah iyo duurka.
Beeraha xayawaanka leh qalab ratchet ah waxaa loo isticmaalaa si loo xoqo noocyo kasta oo laamo. Waxay gooyn karaan caleemaha qaro weyn iyo xayawaanka.
Maqasyadu waxay leeyihiin laba xoqan jarista, waxaana loo isticmaalaa jarida ubaxyada iyo caleemaha yar yar. Maqasyada Bush waxay haystaan ​​xayawaanno badan waxayna ku habboon tahay inay gooyaan duurka. Gacmaha ayaa yareeyaa xooga la isticmaalay inta lagu jiro hawlgalka oo la qabsasho laamaha 50 mm weyn.
Beeraha Rod ee beerta waxaa loo isticmaalaa in lagu xoqo laamaha sare.
Waxaa sidoo kale jira makhaayad iyo farsamooyinka beerta. Waxay kuu ogolaanayaan inaad sameysid shaqo aad u tiro badan wakhtiga ugu gaaban.
Xulashada Mashiinka Dhabarka
Mashiinka gacmaha dheerta leh ee mindiyaha dheer waxaa badanaa loo isticmaalaa xoqidda xoortay. Wixii geedaha waaweyn, maqaarka leh dhar cad ama qallajiye ayaa loo isticmaalaa. Waxay hayaan laanteeda oo ha u ogolaanin inay ka baxaan. Manjadu waa mid dhakhso badan oo waxtar leh. Shirkado farabadan ayaa ku jira moodooyinka mihnadlaha ah ee maqaayadaha maqaarka. Muuqaal ka mid ah alaabta noocaas ah waa gudbin ama isugeyn lagu dhejiyo. Iyada oo tani u muuqato, culeyska gacmaha ayaa si weyn loo yareeyey.
Waxa kale oo jira tusaalooyin leh qabasho telescopic ah. Waxaa loogu talagalay inay ka shaqeeyaan duurka meelo kala duwan.
Meelaha gacanta lagu xiro, inta badan, waxay leeyihiin dabool adag ee Teflon ama zinc. Waxay ka hortagaan in ay ka baxaan caleemaha iyo qashinka.
Waa muhiim! Moodooyinkaas looma kicin karo, maxaa yeelay dusha ayaa dhaawacaya.
Beeraha xayawaanka leh mindiyaha gaaban iyo qummanaan toos ah ayaa sida caadiga ah loo isticmaalaa si sax ah oo loo jarayo dhirta iyo dayrarka. Qalabka isku midka ah waxaa loo isticmaalaa jaridda caleemaha. Doolinta cawska ah ee gaarka ah waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya in la cawska cawska, laakiin sidoo kale in ay sameeyaan ay duurka. Iyadoo ay caawinayaan, waad gooyn kartaa cawska iyo caleemaha dhererka dhererka oo dhan. Qaar kamid ah maqaarka gacanta ayaa loo rogi karaa xag kasta (laga bilaabo 0 ilaa 180 °). Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad gaarto meelo aad u adag oo labada gacmood leh.
Qaababka kale ee cawska cawska ayaa leh gacan qabasho. Waad ku mahadsantahay iyaga, waxaad cawska ku hayn kartaa meel qoyan ama aad jarjartey qadka sare ee xayndaabka iyada oo aan xajin lahayn.
Doolinta dhirta way kala duwan yihiin sida waafaqsan shuruudaha soo socda:
Nooca daboolka caleenta
Ku dhaji dhererka, cabbirka iyo walxaha
Caanaha ugu caansan waxay leeyihiin muuqaal toosan oo caadi ah. Xirmooyinka beeraha ee noocan ah waxay ku haboon yihiin jarista cawska iyo jaridda dhir iyo geedo.
Iyada oo ay caawinaad, dhirbaaxo timo caleemaha cufan ee geedaha.
Noocyada kala duwan ee cidhifyo ama qabatimay ayaa inta badan loo isticmaalaa. Faa'iidada maqaalkan sida waa xajmiga aan ku dhicin laanta iyo caleemaha. Bannaanka u isticmaalaan iyaga oo isticmaalaya manjooyin caleemo isku dhafan.
Maqaarka qarsoon wuxuu kobciyaa laamaha waaweyn, faa'iidooyinkooda ugu weynna waa in aad la shaqeyn kartid maqaskani muddo dheer oo aan lahayn hargab.
Doolowka beerta ee korontada waxaa loo isticmaalaa si loo abuuro naqshad muuqaal ah. Waxay sidoo kale ku haboon yihiin in ay daryeelaan geedo, xoortay iyo dayactir.
Maqasyada noocan oo kale ah waxay ku kala duwan yihiin sifooyinka soo socda:
Nooca iyo nooca maqaarka
Goobta badhanka iyo furayaasha
Qaybta qaybta shaqada ee maqaska waxay leedahay dhejisyo laba jibbaar ah. Waxaad la shaqeyn kartaa laamo waaweyn, laakiin waxay ku xiran tahay masaafada u dhexeysa ilkaha.
Marka aad dooranaysid beeraha korontada ee korontada, fiiro gaar ah u yeel dhererka mindiyaha. Haddii aad rabto in aad abuurto timaha hufan, ka dibna aad u baahan tahay maqlaha gaaban, halka kuwa dheer oo ay u fiican tahay in ay u isticmaalaan si joogto ah. Maqasyadani waxay u adeegi karaan sida qalabka cawska.. Tani waxay suurtogal kuu tahay inaad ku hagaajisid booska mindiyaha, taas oo kuu ogolaanaysa inaad xoqdo wareega xagaladda la rabay.
Qalabka awoodda oo dhan waa halis, sidaas darteed, waxay ku qalabeeyeen nidaam difaaca oo gaar ah. Waxay sidoo kale leeyihiin shaashad ilaalin, oo ku yaala inta u dhexeysa mindiyaha iyo gacanta.
Sida loo doorto maqas loogu talagalay beerta leh mashiinka gaaska
Hadda oo aan ka wada hadalnay qashinka cawska, waa in aan fiirino maqnaashaha leh baasiino gaas.
Mashiinka shidaalku waa mid ku haboon goobaha waaweyn. Uma baahna xidhiidh koronto, sida koronto. Iyada oo gacan ka geysaneysa xamaamyada gaasta, waxaad ku shaqeyn kartaa adigoon wax dhibaato ah ka qabin qayb kasta oo ka mid ah goobaha cimilada oo dhan.
Inkastoo xaqiiqda ah in shidaalku uu leeyahay awood xoog badan iyo mindiyo dheer, waxay leeyihiin dhowr faa'iido:
Gawaarida qiiqa inta lagu jiro hawlgalka
Ma taqaanaa? Mucjisada casriga ah waxay Leonardo da Vinci abuurtay.
Doolinta shidaalka waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya in la gooyo duurka, laakiin sidoo kale cawska. Waxaa loo tixgeliyaa qalabka ugu xoog badan ee dhirta lagu dhajiyo. Maqasyada batroolku waxay gooyaan laanta 4 cm qaro weyn.
Laakiin mashiinka noocan oo kale ah way adagtahay in laga shaqeeyo kharashka miisaankiisa, gaar ahaan haddii aanu tixgelinayno xaqiiqda ah in timo lagu qaban doono gacmaha lagu fiiqayo. Taasi, qalab noocan oo kale ah ayaa ku haboon ragga.
Si aad u iibsato beerta shidaal ee wanaagsan, u fiirso shuruudaha soo socda:
Nidaamka Ka-hortagga Naf-badbaadinta (caafimaadka gacanta ayaa ku xiran).
Fiirinta qiiqa ee mashiinka (tan waxaa loo sameeyaa si qofku u neefsado hawo nadiif ah).
Ujeedada qalabka jarista. Taasi waa, maxaa lagu gooyey shimbiraha loo isticmaalo: in la jaro dusha sare ama qaabaynta tirooyinka.
In kasta oo xaqiiqda ah in unugyada saliidda ee loo isticmaalo meelaha ballaaran, ay yihiin kuwo aad u buuq badan, marka la barbar dhigo maqaarka gacanta, laakiin waxay ku habboon yihiin in la isticmaalo cawska ama daaqadaha.
Laakiin mugdiga iyo miisaanka culus ayaa ah dhibaatooyinka kaliya. Faa'iidada waxay tahay in aaney jirin adeegyadda korantada, gaar ahaan haddii goynta la sameeyo inta badan.
Maqasuska qalinka ah
Haddii aad rabto in aad isticmaasho xayawaanka beerta si gaar ah loogu jaro cawska, ka dib bacaha baayacmushtarka leh ayaa kugu habboon. Waxay isku daraan dhamaan faa'iidooyinka qalabka gaaska iyo korontada. Maqasyada aan qaan-galka lahayn waa nalka iyo iyaga oo aanad arki doonin sida aad u dhajinayso beerta oo dhan.
Qalabaynta beerta mashiinka ama buugaagta ah waa mid caadi ah (cirbadaha furan oo xiran) oo wareegsanaya (blades u jeedaa xagasha aad u baahan tahay). Daraasiin beerta cordless ah waxaa ugu wanaagsan loo isticmaalo jarista cawska. Tan waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in ay shaqeynayaan dhakhso iyo dhaqso.
Sidoo kale maqlaha batariga ayaa dhigaya badhanka qufulka. Tani waxay kaa caawineysaa in laga hortago khidmadda gawaarida ee badhanka bilowga.
Waa muhiim! Soo iibso xamaamyada beerta leh oo kaliya quful si aad uga hortagto dhaawacyada inta lagu guda jiro qashin ama cows.
Ka hor inta aadan iibsan qashinka cawska, fiiro gaar ah u yeelo qaababka soo socda:
Maqaarada gacanta. Xulashada ugu wanaagsani waxay noqon kartaa xirmooyin caag ah oo caag ah oo caag ah. Iyagu ma xoqin doonaan calaacalahooda, oo ka duwan kuwa alwaaxda, kuwaas oo gacmahoodu si deg deg ah u daalaan;
Miisaanka iyo miisaanka miisaanka;
Miyuu qalabku si haboon u shaqeynayaa marka uu furmayo ama xirayo;
Awoodda iyo tirada bateriga;
Xaglaha u jeedka ah ee caanaha. Xaaladdan, ogow haddii aad isticmaali karto daaqada beerta si aad u cawsatid cawska leh meelo kala duwan.
Sidoo kale xusuusnow in xoqidda maqaarka ee maqasku ay ku haboon tahay timo jilicsan, iyo duufka - waxay kaa caawineysaa inaad jarjarato laanta adag.
Shuruudaha aasaasiga ah ee xulashada xiiritaanka beerta
Markaad dooranayso beerta cawska ah ee cawska, xoortay iyo daaqadaha, fiiro gaar ah oo ku saabsan maaddada iyo fiiqanaanta caanaha. Birta la gashto waxaa loo tixgeliyaa walxaha ugu fiican, iyo in si fiican loo xakameyn karo maqaarka waxaa ka wanaagsan in la doorto moodhiyado leh dhadhan teflon ah. Dayntani waxay ka hortagtaa rasiidka ama casiirka inay ka dhuuntaan ciridka.
Guga guntanka beerta waa laba nooc: isdhexgal iyo dabaq. Waxaan kugula talineynaa in aad garaacdo ikhtiyaarka labaad, maadaama ay tahay mid aad ufiican oo lagu kalsoonaan karo. Ka hor inta aadan iibsan maqaska ah cawska ama qashinka, ku hay qalabka gacmahaaga oo samee dhaqdhaqaaq yar. Maqsinnada waqtigaan waa in si fudud loo kala saaraa oo u dhowaadaa sida ugu dhow ee suurto galka ah. Sidoo kale, nooca la doortay waa inuu lahaadaa xargo lagu hagaajin karo. Iyada oo adigu, waxaad hagaajin kartaa meesha ugu fiican ee xaanshiyaha.
Doolinta gaduudka waa in laga sameeyaa wax aan ka dhicin inta lagu jiro hawlgalka. Dadka ugu caansan xilligan waa fibre-gaabka. Waa mid adag, tufaax iyo iftiin ku filan.
Waxa kale oo faa'iido weyn leh ay la socdaan xayawaan ka hortag ah. Waxay qabtaan xamaamyada beerta cawska ama geedaha si adag u xiran inta lagu jiro farsamada shaqada.
Qalabka taageerada ee nooca xiran ayaa kaa caawin doona inaad ilaaliso gacmahaaga inta aad ka shaqeyneyso beerta. Sidoo kale fiiri xaddiga isticmaalka. Caadi ahaan, waxsoosaarayaashu waxay muujinayaan dhumucda laanta laanteeda nooc kasta oo beerta xayawaanka ah.
Ha ku dhaafin qalabka leh xarig. Qalabka ayaa xajin doona weelka hal meel, waxna ma yeeli doontid boogta furan wakhti kasta.
Ma taqaanaa? Jiilaalka Dhexe, maqasyada ayaa loo tixgeliyay hadiyad wanaagsan oo loogu talagalay haweenka.
Ka taxadar mawduuca laga saaro. Haddii alaab-qeybiyeyaashu ay suurtogal u tahay inay bedelaan xaanshiyaha, ka dibna qaado. Xirfadaha noocan oo kale ah waxay ku habboon yihiin in la gooyo.
Laga soo bilaabo dhammaan kor ku xusan, waxaad dooran kartaa in aad iska xiirto beertaada nooc kasta ha ahaato, haddii ay ku jiraan dhejiyo dheer ama gaaban. Soo qaado naftaada mid kasta oo doorasho ah ee xayawaanka beerta iyo daryeelka beertaada.